တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: သူခိုး ခိုးခံရခြင်း
ဒီမနက် အဖေနဲ့ ကျမ မနက်စာ စားရင်း စကားစမြည် ပြောနေတုန်းမှာပဲ အဖေ့ အလုပ်သမားလေး တယောက် အပြေးအလွှား ရောက်လာပါတယ်။
ပုံနှိပ်စက်က ပလိတ်ပြားတွေ ပျောက်လို့တဲ့ … ။
အမှိုက်ထည့်တဲ့ အိတ်ထဲက အမှိုက်တွေလဲ ပြန့်ကျဲနေပြီး အိတ်လဲ မရှိတော့ဘူး … ဆိုပြီး လာပြောပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ကျမ ကမန်းကတန်း လိုက်သွားပြီး ကြည့်တော့ အပြင်ဘက် အိမ်သာနားမှာ စက္ကူမှိုက်တွေ ပြန့်ကျဲနေတယ်၊ ပုံနှိပ်စက်ခန်းဘေးမှာ ထားနေကျ ပလိတ်ပြားချပ်တွေက မရှိတော့ဘူး … ။
သူခိုး ၀င်ခိုးသွားပြီပေါ့ … ။
ဒီသူခိုးက စက္ကူအမှိုက်တွေထည့်တဲ့ ဆာလာအိတ်ထဲကို ပလိတ်ပြားတွေထည့်ပြီး သယ်သွားပုံရပါတယ်။ အမှိုက်တွေကိုတော့ တွေ့တဲ့နေရာမှာ သွန်ထားခဲ့တယ်လေ … ။ ဒီသူခိုးတော့လား … လို့ စိတ်ထဲက ကျိတ်ပြီး ကြိမ်းဝါး လိုက်မိပါသေးရဲ့။ ကိုယ့်ပစ္စည်းက သူ့ဆီပါသွားပြီ ဆိုတော့လည်း စိတ်က တိုမိသပေါ့လေ။
သူခိုး ခိုးခံရလို့ စိတ်တိုနေရုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာမှာ အဖြစ်အပျက်ကို စစ်ကြော သုံးသပ် ရပါသေးတယ်။
အလုပ်သမားလေးတွေကို မေးကြည့်တော့ သူတို့က မနက် ၄ နာရီ ခွဲလောက်မှ အိပ်ကြတယ်တဲ့။ အဲဒီအချိန်ထိ ပလိတ်ပြားတွေက ရှိသေးတယ်။ အိမ်မှာကူဖော်လောင်ဖက် ခေါ်ထားတဲ့ ကလေးမလေးကတော့ မနက် ၅ နာရီ ၄၅ မှာ ထတယ်။ အဲဒီချိန်ထိလည်း အမှိုက်တွေ ပြန့်ကျဲနေတာ မမြင်မိသေးဘူး။ ကလေးမလေးနိုးပြီး အမေ အောက်ထပ်ဆင်းတဲ့ အထိလည်း လက်ရာခြေရာ မပျက်သေးဘူးဆိုပဲ။ နောက်မှ ၀င်းတံခါးဖွင့်ပြီး ကလေးမလေး အပေါ်ထပ် ခဏပြန်တက်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုရွှေသူခိုးက ခပ်တည်တည်နဲ့ ၀င်းတံခါးက ၀င်လာပြီး ခိုးတော်မူတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မနက် ၇ နာရီလောက်ရှိရောပေါ့ … မိုးစင်စင်လင်း နေပြီ။
ဒီသူခိုးကလည်း လူလည်၊ အဟောင်းအစုတ် တွေတော့ မယူရှာဘူး။ ကမန်းကတန်း ခိုးရတာတောင် အကောင်းအဆိုး ခွဲပြီး ခိုးနိုင်စွမ်းရှိပါ့။ ပလိတ်ပြားချပ် အသစ်စက်စက် တွေမှ မ-သွား တာကိုး။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေပေါ့လေ … ပစ္စည်းတွေကတော့ ပါသွားရှာလေပြီ …။ တတ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ်ညံ့လို့ ကိုယ်ခံရတာလို့ပဲ မချင့်မရဲ အောင့်သီးအောင့်သက်နဲ့ပေ့ါ။
အဖေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း တရားသဘောနဲ့သာ ဆင်ခြင်ပြီး နေနိုင်စွမ်းပါတယ်။ ကျမကသာ တနုံ့နုံ့နဲ့။ ကိုယ့်ပစ္စည်း သူများဆီ ပါသွားတယ်ဆိုကတည်းက ကိုယ် ညံ့ဖျင်းရာ ကိုယ်အသုံးမကျရာ ရောက်နေတယ် မဟုတ်လား။
ကျောင်းတက်တုန်းကလည်း တခါ ကြုံခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ခါးပိုက်နှိုက်ခံရတာ။ အဲဒီတုန်းက မဟာမြိုင်မှတ်တိုင်နားက အိမ်တအိမ်မှာ ကျူရှင်တက်နေတာပါ။ ကျောင်းအဆင်းမှာ သူငယ်ချင်းနဲ့ တူတူ မာလာ မှတ်တိုင်ကနေ မဟာမြိုင်ထိ ၅၀ ကားကို စီးသွားပါတယ်။ လွယ်အိတ်ထဲမှာတော့ ကျူရှင်လခ ပေးဖို့ ပိုက်ဆံလေးတွေ ပါလာတယ်။ လဆန်းရက်ဆိုတော့ ခါးပိုက်နှိုက်တွေ မြူးချိန်ပေါ့ … ကိုယ်ကတော့ ဘယ်သတိထား မိမလဲ။ လေး ငါး မှတ်တိုင်လောက် စီးရတာဆိုတော့ အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်သွားတာလည်း ပါတယ်။
ကျူရှင်ရောက်လို့ ဆရာမကို လခပေးမယ်ဆိုတော့မှ ပိုက်ဆံအိတ် တအိတ်လုံး ရှာမတွေ့တော့ဘူး။ သားရေပိုက်ဆံအိတ် အပြားလေးပါ။ အဲဒီထဲမှာ ကျောင်းသားကတ်၊ မှတ်ပုံတင်ကတ်၊ ရေကူးကတ်၊ သွေးလှူကတ် ရှိသမျှကတ် အကုန် ထည့်ထားတာ။ သွားရော … ။
ဒီလိုနဲ့ အပြန်ကားခတောင် မရှိလို့ သူငယ်ချင်းဆီက ၅၀ လောက်ချေးပြီး ပြန်လာခဲ့ရတယ်။
အိမ်ရောက်တော့ ငိုရသေးတယ်။ ပိုက်ဆံနှမြောတာရော … ခါးပိုက်နှိုက် ကျောတာ ခံလိုက်ရသလိုမို့ တနုံ့နုံ့ ဒေါသ အမျက် ချောင်းချောင်း ထွက်တာရော … ။
နောက် တပတ်လောက် အကြာမှာတော့ အင်းလျားဆောင်က သူငယ်ချင်းတွေက ကျမကို သတင်းတခု လာပေးပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်ဘေးက လမ်းမှာ နင့်နာမည်ရေးပြီး ဆိုင်းဘုတ် ထောင်ထားတာ တွေ့တယ်တဲ့။
ကျမလည်း ဘုရားအဆူဆူ တ-ရင်းနဲ့ အပြေးအလွှား သွားကြည့်ရတော့တာပေါ့။
စာကြည့်တိုက်နားမှာ ပလက်ဖောင်းတွေ ပြင်နေကြတော့ အဲဒီ ပလက်ဖောင်းတုံး တတုံးကို ထောင်ပြီး မီးသွေးခဲနဲ့ ကျမနာမည်ကို ကမ္ပည်း ထိုးထားပါတယ်။
အမည် ဘယ်သူ .. ဘယ် အတန်းက ကျောင်းသူ … ပိုက်ဆံအိတ် တအိတ် ကောက်ရထားသည်ပေါ့။
မော်ကွန်းထိန်းဆီမှာ လာယူပါ … ဘာညာ ဘာညာ … ။
ဒါနဲ့ ကျမလည်း မော်ကွန်းထိန်းရုံးခန်း ရောက်ရပါလေရော … ။ ပိုက်ဆံအိတ် ကောက်ရတဲ့သူက ပလက်ဖောင်း ပြင်တဲ့ အလုပ်သမား တယောက်ပါ။ ကြည့်ရတာ ခါးပိုက်နှိုက်က ပိုက်ဆံကိုယူပြီး ကတ်တွေနဲ့ အိတ်အခွံကို လမ်းဘေး ခြုံပုတ်ထဲ ပစ်လိုက်ပုံရပါတယ်။ အဲဒီနေ့ မတိုင်ခင်ညက ရတနာဆောင်ရဲ့ အဆောင်ညစာစားပွဲ ရှိတော့ အဲဒီကအပြန် ပြုတ်ကျခဲ့တာ များလားလို့ အလုပ်သမားလေးက ထင်ပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ကျောင်းသားကတ် အတိုင်း နာမည် အတန်း စတာတွေကို ပလက်ဖောင်း တုံးမှာ မီးသွေးနဲ့ ရေး၊ အဲဒီလမ်းနဘေးမှာဘဲ ခုံကလေး ပေါ်တင်ပြီး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထား တာပါပဲ။
နောက်ဆုံးတော့ ပိုက်ဆံတွေ ဆုံးပေမဲ့ ကတ်တွေအားလုံး ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ သူခိုးလက်က ပြန်ရတဲ့ ကတ်တွေမို့လားတော့ မသိဘူး ကျိုးကျိုးကြေကြေနဲ့၊ မှတ်ပုံတင်ဆိုလည်း ကျက်သရေကို မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒါကိုပဲ ခုထိ ကိုင်နေရတုန်း။ တတ်နိုင်ဘူး၊ အသစ်လုပ်ရင် ပိုက်ဆံထပ်ကုန်အုံးမှာ မဟုတ်လား။
သူခိုးဆိုတာမျိုးကလည်း တော်တော်ဒုက္ခ ပေးတတ်တာပါလား။ ကိုယ့်ပစ္စည်းလဲ ပျောက်ရ၊ စိတ်အနှောက်အယှက်လဲဖြစ်ရ။ ဒါကြောင့် ဘုရားရှိခိုးပြီးတဲ့အခါ ရန်သူမျိုးငါးပါး မှ ကင်းဝေးရပါလို ကြောင်း ဆုတောင်းကြတာ ဖြစ်မယ်။ ရေ၊ မီး၊ မင်း၊ ခိုးသူ၊ မချစ်မနှစ်သက်သောသူ … ဒီ ငါးပါးထဲမှာ ရေနဲ့ မီး နှစ်ပါး ကတော့ သဘာဝ ရန်သူတွေပဲ။ ကျန် ၃-ပါးက လူတွေ။
တကယ်တမ်း စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ ရေဘေး မီးဘေး ဖြစ်ရတာ၊ ခိုးသူထူပြောရတာ … အဲဒါတွေက အလယ်ရန်သူ ပေါ်မှာ မူတည်နေမလား စဉ်းစားမိပါရဲ့။ မချစ်မနှစ်သက် အပ်သော သူကတော့ အမွေခံ သားဆိုးသမီးဆိုးကို ဆိုလိုတယ်လို့ ကြားဖူးတာပဲ။ ဒါကြောင့် ကျန်ရန်သူတွေက အသေးအဖွဲပါ … အလယ်ရန်သူ ကြီးကများ အဓိက ကျနေမလားပဲလို့ တွေးမိတွေးရာ တွေးရင်း …. သူခိုးအကြောင်းကနေ … ချော်တော ငေါ့လို့ ရန်သူမျိုး ငါးပါးအကြောင်း ရောက်သွားပါရောလား။
Posted by မေဓာဝီ at 4:16 AM
Ma May, i am on chinese new year holiday, so i can't come you blog for two weeks, but if i have time i will try to come to your blog wherever i am.
Happy chinese new year Ma May..
May you be happy in this chinese new year...
2/18/2007 3:46 AM
2/19/2007 7:14 PM